Igbe Nkwado Onyinye Ga-esi Na Ugwu Fate Square.
Igbe onyinye Onyinye Square
Igbe Onyinye Ezumike Ezumike
Akwukwo osisi ifuru
Gbalịrị ikpu okooko osisi n'ime igbe ifuru onyinye onyinye ifuru? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị na-efu ọtụtụ egwu mgbe ị na-emejupụta nke ugbu a maka onye ị hụrụ n'anya. Specialzọ pụrụ iche iji mee mmadụ ụbọchị, na-enye okooko osisi kachasị amasị n'ime igbe onyinye ezumike oge ezumike a. Dezie okooko osisi kachasị mma ịchọrọ ma tinye ya n'ime igbe ifuru a omenala ma mechie mkpuchi ahụ ruo mgbe mmadụ mepere ya maka ihe ịtụnanya dị ịtụnanya. Igbe nkwakọ ngwaahịa dị elu nke nwere nnukwu ihe eji achọ mma bụ naanị ihe ịchọrọ iji woo onye gị pụrụ iche. Windo PVC na-enye gị ohere itinye ọnụ n'ime igbe ahụ na-enweghị imepe ya. Igbe nke jupụtara na-esi ísì ụtọ nwere ike ime onye ọ bụla ịmụmụ ọnụ ọchị. Ọ́ bụghị ya?
Iju onye ọ bụla anya na ị chọrọ. Nweta igbe onyinye ifuru a square mara mma maka emume ọ bụla ma hazie ya dịka ịchọrọ. Anyị ga-ahụ na ị nwetara ihe ị rịọrọ.
Mpempe akwụkwọ Igbe okirikiri
Still ka na-acho ihe i kechiri ifuru gi n’ime? Elepụla anya ọzọ ma nweta igbe ifuru onyinye ifuru a ma ama dị ịtụnanya iji mee ka mmadụ niile hụ ibe gị n'anya. Ka ísìsì ya too oge ezumike a. Zụta ya maka ekeresimesi ma ọ bụ ememe ncheta ọmụmụ ma ọ bụ ọbụlagodi maka ihe ịtụnanya agbamakwụkwọ, igbe a ga-emechu gị ihu ma ọlị. Ka ihunanya gi na-efeghari n’ime ikuku site n’iko nke ahihia mara mma. Ejiri chipboard mee, igbe onyinye ezumike ezumike dị ogologo ma dịkwa mfe ijikwa. Ihe ị ga - eme bụ itinye okooko osisi n’ime.